Tag: kutenga | Martech Zone
Me-Commerce uye Remangwana Rekutengesa
Svondo, May 25, 2014 Mugovera, Chivabvu 24, 2014 Douglas Karr
Retail iri kuchinja nekukurumidza - zvese zviri pamhepo uye pasiri pamhepo. Pachivanhu, nzvimbo dzekutengesa dzagara dziine yakaderera purofiti margins uye yakakwira vhoriyamu kuburitsa bhizinesi mhedzisiro yavanoda kuti vararame. Tiri kuona kukurumidza kutendeuka muzvitoro mazuva ano uko tekinoroji iri kuwedzera kukura uye kuwedzera kushanda. Nzvimbo dzekutengesa dzisiri kutora mukana dziri kufa… asi vatengesi vari kushandisa tekinoroji varidzi vemusika. Demographic shifts, iyo tech shanduko, uye mutengi kudiwa kune zvimwe zvakasarudzika